Vavolombelon’i Jehovah any Azia
MPONINA 4 315 759 010
MPITORY 703 271
FAMPIANARANA BAIBOLY 732 106
Afaka mitondra olon-kafa ve?
Nanome fanasana Fahatsiarovana ho an’ny lehilahy iray mpikarakara parking ny rahalahy iray any Indonezia, roa andro talohan’ilay fotoana. Silamo ilay mpikarakara parking ary hoy izy tamin’ilay rahalahy: ‘Afaka mitondra olon-kafa ve aho? Fanasana iray ihany mantsy no nomenao ahy.’ Nohazavain’ilay rahalahy fa afaka mitondra olon-kafa izy. Nangataka fanasana fanampiny ilay lehilahy, satria be dia be, hono, ny havany. Nomen’ilay rahalahy fanasana 20 àry izy, ary nilazany fa Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy io fotoan-dehibe io, ary afaka manatrika daholo na Kristianina na Silamo. Nilaza ilay lehilahy fa hitondra olona 60 na 70 eo ho eo izy.
Efitrano lehibe tao amin’ny hotely iray no nanaovana an’ilay Fahatsiarovana, ary efa nisy olona 248 tao. Nony nanomboka kelikely ilay fandaharana, dia iny ilay lehilahy fa tonga niaraka tamin’ny olona 100 teo ho eo. Tao ny lehilahy, vehivavy, ankizy, be taona, ary nisy aza vehivavy bevohoka be. Nanofa fiara maromaro ry zareo mba hitondra azy tany. Gaga ny mpiambina an’ilay hotely nahita an’ilay fokonolona, ka tsy navelany hiditra ry zareo. Nahoana tokoa moa ireo Silamo be dia be ireo no hamonjy fotoam-bavaka alamin’ny Kristianina? Nentiny tany amin’ilay efitrano lehibe ihany anefa izy ireo, rehefa nampiseho fanasana. Efa feno hipoka tao, ka ny 60 teo ho eo no tafiditra.
Nitsidika an’ilay mpikarakara parking ilay rahalahy, andro vitsivitsy taorian’izay. Nanontaniany izy raha tian’izy ireo ilay fandaharana. Menamenatra ihany, hono, izy rehetra nanatrika an’ilay izy. Gaga anefa ry zareo rehefa nirava, fa tsara fanahy be ny olona ary niarahaba azy ireo. Nasain’ilay rahalahy hamonjy lahateny manokana izy, ny alahadin’io. Notaominy koa ny havany sy ny mpiray tanàna taminy, ka nisy 40 teo ho eo ry zareo. Efa hifarana ny fivoriana vao tonga izy ireo, ka nanapa-kevitra ny anti-panahy hoe haverina ilay lahateny. Nanolotra an’ilay lahateny indray ny rahalahy iray, sady nanazava an’ilay fandaharana, anisan’izany ny hira sy ny vavaka. Koa satria Silamo ireo olona ireo, dia teny mahazatra azy no nampiasain’ilay mpandahateny. Nataony hoe “Boky Masina”, ohatra, ny “Baiboly”, ary “mpaminany Aïssa” i “Jesosy.”
Nitsidika an’ilay lehilahy tany an-tranony ny anti-panahy iray taorian’izay, ary nianatra tamin’ny bokikely Mihainoa An’Andriamanitra izy ireo. Nanatrika teo koa ny olona 12 hafa, ka nisy vehivavy silamo sy ankizy vitsivitsy tamin’izy ireo.
Boky hovakina ao anaty bisy
Mongolia: Mametraka boky hovakin’ny mpandeha ireo mpitory, rehefa nahazo alalana
Mitety ny faritra rehetra any Mongolia ny bisy miala avy ao Oulan-Bator. Maharitra roa andro ny dia indraindray, ka matetika ny mpandeha no mitazana avy eo am-baravarankely fotsiny na matory. Tsy misy gazety hovakina rahateo moa ao amin’ireny bisy ireny, nefa ny Mongol tia mamaky boky. Nahita hevitra àry ireo rahalahy avy ao amin’ny Fiangonana Songinokhairkhan, ka nilazany ny saofera hoe: “Misy boky tsara be mba tianay homena anareo. Tianay hapetraka ao amin’ny paosin-tsezan’ny fiaranareo izany mba hovakin’ny olona, hoatr’ireny any anaty fiaramanidina ireny.” Saofera valo no nanaiky. Gazety 299 sy bokikely 144 àry no voapetrak’ireo rahalahy. Nosoloan’izy ireo koa ireny gazety ireny rehefa tonga ny gazety vaovao.
Diso adiresy ry zareo
Nisy anabavy tsy nitory intsony nandritra ny valo taona tao amin’ny firenena iray any Azia. Nasaina nitsidika azy io ny anti-panahy roa. Mbola tsy nahita azy mihitsy anefa izy ireo, ka niantso azy aloha ary nifanao fotoana taminy tany amin’ny tsenabe mpanao ambongadiny. Nanana fivarotana tao mantsy ilay anabavy. Nandeha tamin’ny lalan-kely niolakolaka be ry zareo vao nahita an’ilay fivarotana. Niditra izy ireo ary nisy vehivavy iray niarahaba azy. Nisy Baiboly kely teo amin’ny latabatr’ilay ramatoa. Nanontanian’ireo rahalahy ny anarany, ny tanàna niaviany, ary ny taonan’ireo zanany roa. Nino àry ireo rahalahy fa io tokoa ilay anabavy, ka hoy izy ireo taminy: “Anadahinao izahay. Vavolombelon’i Jehovah hoatr’anao.”
Gagagaga anefa ilay ramatoa niteny hoe: “Izaho aloha Kristianina e.” Tsy azon’ireo rahalahy ny fihetsiny. Nomen’izy ireo gazety vitsivitsy ihany anefa izy, ary noraisiny tsara izany. Rehefa niala tao ireo rahalahy vao tonga saina hoe hay diso adiresy ry zareo. Tokony handeha tao amin’ny fivarotana No. 2202 ry zareo, nefa lasa nankao amin’ny No. 2200 indray. Hoy ny iray tamin’izy ireo: “Nangorintsina ny lamosiko. Hoatran’ny hoe anjely mihitsy no nitarika anay nankao amin’ilay fivarotana. Nitovy be ny anaran’ilay ramatoa sy ny an’ilay anabavy, nitovy tanàna niaviana ry zareo, ary nitovitovy taona koa ny zanany. Raha hafa mantsy ny anaran’ilay ramatoa na ny tanàna niaviany, dia ho fantatray avy hatrany hoe tsy ilay anabavy izy.” Nandalo fivarotana roa ireo rahalahy dia tonga tao amin’ny fivarotan’ilay anabavy. Efa sasa-niandry azy ireo izy.
“Menatra be aho, satria izaho efa ela be no tsy nitory intsony nefa tsy nanadino ahy mihitsy i Jehovah”
Soa fa diso adiresy ireo rahalahy. Nianatra Baiboly mantsy ilay ramatoa sady efa mivory. Ilay anabavy indray efa manatrika ny fivoriana rehetra, sady mazoto manompo. Hoy izy: “Menatra be aho, satria izaho efa ela be no tsy nitory intsony nefa tsy nanadino ahy mihitsy i Jehovah.”
SMS no alefa rehefa ratsy ny andro
Philippines: Mandefa SMS i Greg
Manitatra faritany any amin’ny Nosy Catanduanes, any Philippines, i Greg sy Alma. Be tendrombohitra be any, ka matetika izy ireo no mandeha an-tongotra 19 kilaometatra rehefa hitory any amin’ny faritra sasany. Indraindray izy ireo mila mivoy lakana adiny roa vao tonga any amin’ny nosy hafa. Tsy afaka mivoaka ny trano anefa ry zareo rehefa ratsy be ny andro. Tsy te hipetra-potsiny izy ireo, fa aleony mitory an-telefaonina. Manome tolotra mora be ahafahana mandefa SMS tsy misy fetrany mantsy ny tambazotra ampiasainy, ka iny no hararaotiny hitoriana.
Inona no soratan’i Greg ao amin’ilay SMS? Lazainy aloha ny anarany, dia avy eo izy miteny hoe: “Misy hafatra avy ao amin’ny Baiboly mba tiako horesahina aminao.” Anisan’ny andinin-teny hitany hoe mandaitra ny Jaona 17:3. Rehefa avy manonona azy io izy dia manontany hoe: Iza àry ilay tena Andriamanitra, ary iza ilay hoe Jesosy Kristy? Raha mamaly ilay olona, dia alefany any aminy ny Salamo 83:18 na andinin-teny hafa. Raha mbola mamaly ihany ilay olona, dia anontaniany raha afaka manohy an’ilay resaka an-telefaonina izy ireo. Nilaza i Greg sy Alma fa be dia be no manaiky.
Nanana fanontaniana be dia be ny vehivavy anankiray, ka nifandefa SMS imbetsaka ry zareo. Lasa nianatra Baiboly ilay ramatoa. Noresahiny tamin’ny zanak’anadahiny sy ny mpiara-miasa taminy koa ny zavatra nianarany. Efa vita batisa izao izy telo ireo.